सुस्मिता काण्डबाट फाँ,सीको सजाय लागु हुनु पर्छ नत्र म त्यस्तै गरेर फाँ,सीमा चढ्ने हो! आमाले पिडा पोखिन (मार्मिक भिडियो) – Sandesh Munch
सुस्मिता काण्डबाट फाँ,सीको सजाय लागु हुनु पर्छ नत्र म त्यस्तै गरेर फाँ,सीमा चढ्ने हो! आमाले पिडा पोखिन (मार्मिक भिडियो)
June 22, 2020 387
हेटौंडामा मंगलबार बिहान मृत अवस्थामा एक युवतीको शव फेला परेको छ । हेटौंडा–४ कर्रास्थित सुर्चचोक नजिकै अन्दाजी २६ वर्षीया सुस्मिता थापाको शव मृ’त अवस्थामा फेला परेको हो ।
बन्द कोठामा थापाको शव फेला परेको र घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी इन्द्रबहादुर रानाले बताए । ‘आ ‘त्म’ह त्या हो वा ह त्या हो भन्नेबारे अनुसन्धन भइरहेको छ । महिलाका माइती पक्षलाई हामीले बोलाएका छौं ।
उहाँहरु कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका -८ बोडगाउँ बाट आउँदै हुनुहुन्छ । महिलाको शव बन्द कोठाभित्र भएका कारण हामीले ढोका खोलेका छैनौं ।’ डीएसपी रानाले बताए ।
उनका अनुसार घ ट नास्थलमा र ‘गत पनि देखिएको छ । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार मृतक महिलाका पतिको करिब छ महिना अगाडि सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमेको पाइएको छ । पिडा सुन्नै नसकिने सुस्मिता को आमा संग गरेको कुराकानी हेर्नुहोस ।
Prevकैलालीमा क्वारेन्टिनबाट घर पठाइएका ५८ जनामा कोरोना पुष्टि
Nextठेलामा मोमो राखेर बेच्ने व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि…